နိုဝင်ဘာ ၂ ရက် နေ့က သံတမန်များအား တွေ့ဆုံသည့် ဘင်္ဂလီကျေးရွာသားများအထဲတွင် အကြမ်းဖက်သမား ၃ ဦးပါဝင်သဖြင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း သံတမန်များရှေ့တွင်ပင် ဖမ်းဆီးပြီးမှ ချက်ချင်း ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။ ယနေ့ထုတ် Daily Eleven သတင်းစာတွင်လည်း သံတမန်များအား လာရောက်တွေ့ဆုံသည့် ဘင်္ဂလီလူအုပ်ထဲတွင် အကြမ်းဖက် သမား သုံးဦးပါဝင်သဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း ယင်းသံတမန် များရှေ့မှာပင် ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်း “ သံတမန် ၁၀ ဦး မောင်တောသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာ သတင်း” တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယင်းနေရာတွင် သတင်းရယူရန် ရောက်ရှိနေခဲ့သူ သတင်းထောက် တစ်ဦးကို နိရဉ္စရာ သတင်းဌာနမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ၎င်းသတင်းမှာ ဟုတ်မှန်ကြောင်းနှင့် ယင်းသို့ ဖမ်းဆီးစဉ် သံတမန်များ မျက်နာပျက်နေကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူများနှင့် သံတမန်အချို့ စကားတီးတိုး ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်က ပြန်လွတ်ရန် အမိန့် ပေးလိုက်ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။ “ ကျီးကန်းပြင် (မြောက်) ရွာ မှာ ဖြစ်တာပါ။ သူတို့က သံတမန်တွေနဲ့ တွေ့မယ့် ဘင်္ဂလီ လူအုပ်နဲ့ ရောပြီးပါလာတယ်။ ဒါကို နယ်ခြားစောင့်က ဖမ်းတယ်။ သံတမန်တွေက မျက်နာ ပျက်နေတယ်။ သိပ်လိုလားဟန် မရှိဘူး။ နောက်တော့ သူတို့စကားတီးတိုး ပြောဆိုကြတာကို တွေ့ရတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးက ပြန်လွတ်ပေးဖို့ ခိုင်းလိုက်တယ်” ဟု သူက ပြောကြားသည်။
ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေအထက်တွက် မည်သူမျှ မရှိရဟု ဆိုသော်လည်း ယခုလုပ်ရပ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအထက်တွင် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ ရှိနေသည်ကို ပြသနေခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် ယခု ဖြစ်ရပ်အပေါ် လွန်စွာ စိတ်ပျက်မိကြောင်း သူက ဝေဖန် ပြောကြားသည်။ နိုင်ငံခြား သံတမန်များ ရောက်ရှိလာသည့် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က မောင်တောမြို့တွင် အကြမ်းဖက်အားပေး ယူအင်၊ အိုင်အန်ဂျီအို အဖွဲ့အလိုမရှိ ထွက်သွား၊ Terrorist Help Group UN, INGO, Get Out ဟု ရေးသားထားသော စာရွက်များကို ကပ်ပြီး လူပ်ရှားမူတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းကမ်ပိန်း လူပ်ရှားမှုကို လူမှုကွန်ရက် (မောင်တော)မှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံ- ရခိုင်ဂေဇက်)
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← မောင်တောတွင် အလုံပိတ်ထားသည့် ခြံစည်းရိုးများကို လုံခြုံရေးအရ ဖယ်ရှား